काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकामा १५ दिनको शिशुमा नोवल कोरोना भा’इरस सबै मिलि स्वास्थ लाभको कामना गरौ – Khabar PatrikaNp
काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकामा १५ दिनको शिशुमा नोवल कोरोना भा’इरस सबै मिलि स्वास्थ लाभको कामना गरौ
August 22, 2020 295
काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकामा १५ दिनको शिशुमा नोवल कोरोना भा’इरस (कोभिड-१९) संक्रमण देखिएको छ । ती शिशुको बिहीबार पोजेटिभ रिपोर्ट आएको नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत एक अधिकारीले जानकारी दिए ।‘कन्ट्या’क्ट ट्रेसिङ’ का क्रममा शिशुको कोरोना परीक्षण गरिएको थियो । गत सोमबार ती शिशुका ३४ वर्षीय बुबालाई सास फेर्न गा’ह्रो भएपछि सातदो’बाटो’स्थित एक निजी अस्पताल लगिएको थियो । अस्पतालले बिरामीको उपचार गर्न नमानेपछि पाटन अस्पताल पुर्‍याइयो ।
उनका बाबु मार्केटिङ रि’प्रे’जेन्टे’टिभ हुन् । उनीबाट नै शिशुमा कोरोना स’रेको बताइएको छ। पाटन अस्पतालले उपचार त गर्‍यो तर आ’ई’सीयू नपुग्ने भनेपछि फेरि म’ण्डिखा’टरस्थित निजी अस्पताल पुर्‍याइयो’ उनका एक आफन्तले भने, ‘परीक्षण गर्दा उहाँको रिपोर्ट पोजेटिभ आयो ।’ त्यसपछि शिशुको आमा र हजुरबुबाको समेत रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ । एकाघरमा बस्दै आएका शिशुका हजुरआमा र काकाको भने रिपोर्ट ने’ग’टिभ आएको छ । नवजात शिशुबाहेक सबैको परीक्षण निजी प्रयोगशालामा गरिएको नगरपालिका स्रोतले जानकारी दिएको छ।
यो पनि -भदौ १६ गतेबाट कुन-कुन मुलुकमा नियमित उडान, कहाँ चार्टर्ड ?
काठमाडौं- सरकारले पीसीआर परीक्षण सहज भएका देश र शरहरुबाट नेपाली नागरिक ल्याउन नियमित उडान शुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। नियमित उडान नहुने ठाउँमा चार्टर्ड उडान गरिने भएको छ ।
सरकारको प्रवक्ता डा युवराज खतिवडाले भदौ १६ बाट नियमित उडानको तालिका पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्ने जानकारी दिएका हुन् ।
यी देशमा नियमित उडान
नियमित उडान नहुने मुलुकमा चार्टर्ड उडान
साउदी अरब, कतार र कुवेत जस्ता पीसीआर परीक्षण सहज नभएका देशमा नियमित उडान नहुने डा खतिवडाले जनाएका छन्।
यस्तो देशमा सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतवासले चार्टर्ड उडान गर्ने जानकारी दिए ।
यस्तै, सरकारले नेपाल प्रवेश गर्ने हवाई यात्रीको संख्यासमेत तोकेको छ। डा खतिवडाले नियमित तथा चार्टर्ड उडान गर्दा दैनिक पाँच सयभन्दा बढी यात्री नहुने गरी पर्यटन मन्त्रालयले तालिका मिलाउने जानकारी दिए।
Prevतपाईको भाग्यरेखा भदौ महिनामा कस्तो छ ? हेर्नुहोस यो महिनाको राशिफल
Nextकोरोनाबाट एकैदिन ६ बर्षीया बालिकासहित ९ को मृत्यु, मृत्यु हुनेको संख्या १ सय ४६ पुग्यो
आफू भाइरल हुन् यसरी बनाएका रहेछन् अर्जुनले सबलाई उल्लु (हेर्नुहोस् भिडियो)
नेपाल रेल्वे कम्पनीमा जागिर खानको लागि ३२ हजार जनाले आवेदन
बाचाहरु कोरोना भाइरसको महामारीका कारण पूरा सकिन: प्रधानमन्त्री ओली
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (29411)
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (27952)
काठमाडौँ महानगरपालिकाका यी ठाउँहरु सिल गरियो, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (27748)
कलिलो यु’वतीहरु राखेर यौ’न धन्दा : भिडियो हेर्नुहोस (24460)
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस् (21976)
२५०० तिरे काठमाडौंमा १५ वर्षे किशोरी छ्यापछयाप्ती,साहुनीले १५ सय खाइदिन्छे, मलाई एक हजारमात्रै। थोरै पैसा पाउँदा रुन मन लाग्छ। (20806)
सोनी हाङ्मा लिम्बुको प्रेमी भनिएका डीकेन लिम्बु आए मिडियामा, गरे सबैलाई चकित पार्ने खुलासा…! भिडियो हेर्नुहोस (15538)
मुस्लिम अरबिक महिलालाई ग’र्लफ्रेन्ड बनाउदा काठमाण्डौमा महल बन्यो… (14864)
अचानक सिल गरियो भर्खरै काठमाडौंका यी ठाउँहरु, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (13552)
आफ्नो श्रीमती भगाउनेको श्रीमती लिएर फरार (13248)
एक मिनेटको फरकमा सुमिताले जन्माइन तीन छोरा !
यसरी मा’रि’एको रहेछ दुई प्रहरीलाई ! पक्राउ परेकाले दिए यस्तो वयान….!